Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Mbụ 9:1-44
Ndị Izrel ndị si Babịlọn lọta e debara aha ha n’akwụkwọ n’ezinụlọ n’ezinụlọ (1-34)
Ndị ezinụlọ Sọl (35-44)
9 E debara aha ndị Izrel niile n’akwụkwọ n’ezinụlọ n’ezinụlọ. E dere ha n’akwụkwọ e dere gbasara ndị eze Izrel. A dọọrọ ndị Juda n’agha laa Babịlọn maka na ha erubereghị Chineke isi.+ 2 Ndị mbụ laghachiri n’ala ha ketara bụ ụfọdụ ndị Izrel, ndị nchụàjà, ndị Livaị, na ndị na-eje ozi n’ụlọ nsọ.*+ 3 Ụfọdụ ndị Juda,+ ụfọdụ ndị Benjamin,+ ụfọdụ ndị Ifrem, na ụfọdụ ndị Manase gara biri na Jeruselem. Ha bụ: 4 Yutaị nwa Amaịhọd nwa Ọmraị nwa Imraị nwa Benaị, onye si n’agbụrụ Pirez+ nwa Juda. 5 Ụmụ ụmụ Shila ndị bi ebe ahụ bụ Asaya bụ́ ọkpara na ụmụ ya. 6 Ụmụ Zira+ ndị bi ebe ahụ bụ Jeyuel na ụmụnne ya dị narị isii na iri itoolu (690). 7 Ụmụ ụmụ Benjamin ndị bi ebe ahụ bụ Salu nwa Meshọlam nwa Họdavaya nwa Hasenua, 8 na Ibniya nwa Jeroham, na Ila nwa Ọzaị nwa Mikraị, nakwa Meshọlam nwa Shefataya nwa Ruel nwa Ibnaịja. 9 Ụmụnne ha ndị e dere aha ha n’ezinụlọ n’ezinụlọ dị narị itoolu na iri ise na isii (956). Ndị a niile bụ ndị isi ọnụmara ha. 10 Ndị nchụàjà ndị bi ebe ahụ bụ Jedeya, Jehoyarib, Jekin,+ 11 na Azaraya nwa Hilkaya nwa Meshọlam nwa Zedọk nwa Mereyọt nwa Ahaịtọb, onyeisi n’ụlọ* ezi Chineke. 12 Ndị ọzọkwa bụ Adaya nwa Jeroham nwa Pash-họ nwa Malkaịja, na Measaị nwa Adiel nwa Jazera nwa Meshọlam nwa Meshilemit nwa Ịma, 13 nakwa ụmụnne ha, bụ́ ndị isi ọnụmara ha. Ha niile dị otu puku na narị asaa na iri isii (1,760). Ha bụ ụmụ nwoke gbasiri ike, ndị na-adị njikere ịrụ ọrụ a na-arụ n’ụlọ ezi Chineke. 14 Ndị Livaị ndị bi ebe ahụ bụ Shemaya+ nwa Hashọb nwa Azraịkam nwa Hashabaya, onye si n’agbụrụ Meraraị, 15 na Bakbaka, Hiresh, Gelal, Matanaya nwa Maịka nwa Zikraị nwa Esaf, 16 Obedaya nwa Shemaya nwa Gelal nwa Jedutọn, nakwa Berekaya nwa Esa nwa Elkena. Berekaya biri n’ime obodo ndị Netofa.+ 17 Ndị na-eche nche n’ọnụ ụzọ ámá+ bụ Shalọm, Akọb, Talmọn, na Ahaịman. Shalọm nwanne ha bụ onyeisi ha. 18 Ọ na-anọbu n’ọnụ ụzọ ámá eze n’ebe ọwụwa anyanwụ.+ Ọ bụ ndị a bụ ndị na-eche nche n’ọnụ ụzọ ámá nke ebe ụmụ Livaị mara ụlọikwuu. 19 Ọ bụkwa Shalọm nwa Kore nwa Ebayasaf nwa Kora, na ụmụnne ya ndị si n’ezinụlọ ndị nna nna ya, bụ́ ụmụ Kora, bụ ndị na-ahụ maka iche ọnụ ụzọ ụlọikwuu nche. Ọrụ ndị nna nna ha nọ na-arụ bụkwa iche ọnụ ụzọ ụlọikwuu Jehova nche. 20 Finihas+ nwa Elieza+ bụ onye ndú ha n’oge gara aga. Jehova nọnyekwaara ya. 21 Zekaraya+ nwa Meshelemaya na-eche ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute nche. 22 Ndị niile a họọrọ ka ha na-eche ọnụ ụzọ dị iche iche nche dị narị mmadụ abụọ na iri na abụọ (212). Ha biri n’ime obodo ha dị iche iche n’usoro e si dee aha ha n’akwụkwọ n’ezinụlọ n’ezinụlọ.+ Devid na Samuel onye ọhụ ụzọ+ họpụtara ha ịrụ ọrụ a a na-enye ndị a tụkwasịrị obi. 23 Ha na ụmụ ha na-ahụ maka iche ọnụ ụzọ ámá ndị dị n’ụlọ Jehova nche,+ ya bụ, n’ọnụ ụzọ ámá ndị dị n’ụlọikwuu. 24 Ndị na-eche ọnụ ụzọ ámá nche na-anọ n’akụkụ anọ ya, ya bụ, n’ebe ọwụwa anyanwụ, n’ebe ọdịda anyanwụ, n’ebe ugwu, nakwa n’ebe ndịda.+ 25 Ọ na-abụ ụmụnne ha gụrụ gụrụ, ha esi n’ime obodo ha dị iche iche bịa nyere ha aka abalị asaa. 26 E nwere ndị isi* anọ n’ime ndị na-eche ọnụ ụzọ ámá nche, ndị e nyere ọrụ a na-enye ndị a tụkwasịrị obi. Ha bụ ndị Livaị. Ha na-ahụ maka ọnụ ụlọ ndị dị* n’ụlọ ezi Chineke nakwa akụ̀ ndị dị na ya.+ 27 Ha na-eche nche gburugburu ụlọ ezi Chineke chi abọọ. Ọ bụ ha na-ahụ maka iche nche, na-ahụkwa maka mkpịsị ugodi. Ọ bụkwa ha na-emeghe ụzọ n’ụtụtụ ọ bụla. 28 Ụfọdụ n’ime ha na-ahụ maka arịa+ ndị e ji ejere Chineke ozi. Ha na-agụ ha ọnụ mgbe ọ bụla a na-ebubata ha nakwa mgbe ọ bụla a na-ebupụ ha. 29 A họpụtakwara ụfọdụ n’ime ha ka ha na-ahụ maka arịa dị iche iche, na-ahụkwa maka arịa niile dị nsọ,+ ntụ ọka e gwere nke ọma,+ mmanya,+ mmanụ,+ frankinsens,+ nakwa mmanụ balsam.+ 30 Ụfọdụ ụmụ ndị nchụàjà na-esikwa mmanụ balsam. 31 Ọ bụkwa Matitaya, onye Livaị, ọkpara Shalọm, onye si n’agbụrụ Kora, na-ahụ maka ime keeki ndị dị mbadamba. Ihe a bụ ọrụ a na-enye onye a tụkwasịrị obi.+ 32 Ụfọdụ ụmụ Kohat, bụ́ ụmụnne ha, na-ahụ maka achịcha a na-enye Chineke.+ Ha na-eme achịcha a n’ụbọchị izu ike ọ bụla.+ 33 O nweghị ọrụ ọzọ e nyere ndị na-abụ abụ, ndị isi ezinụlọ ndị Livaị, ndị na-anọ n’ọnụ ụlọ ndị dị n’ụlọ nsọ,* n’ihi na ha na-arụ ọrụ ha ma n’ehihie ma n’abalị. 34 Ọ bụ ndị a bụ ndị isi ezinụlọ ndị Livaị n’ezinụlọ n’ezinụlọ. Ha biri na Jeruselem. 35 Jeayel biri na Gibiọn.+ Ọ bụ ya bụ nna ndị Gibiọn. Aha nwunye ya bụ Meaka. 36 Ọkpara ya bụ Abdọn. Ụmụ ya ndị ọzọ bụ Zọọ, Kish, Bel, Nee, Nedab, 37 Gidọ, Ahayo, Zekaraya, na Miklọt. 38 Miklọt mụrụ Shimea.* Ha niile bikwa ụmụnne ha* nso na Jeruselem, ha na ụmụnne ha ndị nke ọzọ. 39 Nee+ mụrụ Kish, Kish amụọ Sọl,+ Sọl amụọ Jonatan,+ Malkaị-shua,+ Abinadab,+ na Eshbel. 40 Jonatan mụrụ Merib-bel,+ Merib-bel amụọ Maịka.+ 41 Ụmụ Maịka bụ Paịtọn, Melek, Taria, na Ehaz. 42 Ehaz mụrụ Jera, Jera amụọ Alemet, Azmavet, na Zimraị. Zimraị mụrụ Moza, 43 Moza amụọ Binia na Refeya, Refeya amụọ Eliesa, Eliesa amụọ Ezel. 44 Ezel mụrụ ụmụ isii. Aha ha bụ Azraịkam, Bokeru, Ishmel, Shearaya, Obedaya, na Henan. Ha niile bụ ụmụ Ezel.
^ Ma ọ bụ “ndị Netinim.” Na Hibru, “ndị e nyere n’onyinye.”
^ Ma ọ bụ “dike.”
^ Ma ọ bụ “maka ebe ndị a na-anọ eri nri.”
^ Na Hibru, “Shimiam.” Ọ bụ otú ọzọ e si ede aha a.
^ Ya bụ, ndị ebo Benjamin ibe ha.